सबैकी साझा दिदी, जसले २ सय भन्दा बढिलाई टीका लगाइन्, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सबैकी साझा दिदी, जसले २ सय भन्दा बढिलाई टीका लगाइन्
काठमाडौं । दिदीबहिनीको हातको टीका लगाउन नपाएका र दिदीबहिनी नभएकालाई सबैकी साझा दिदी अन्जली मास्केले भाइटीका लगाइदिएकी छन्।
मास्केले करिब २ सय जनालाई टीका लगाइदिएकी हुन्। उनले सगुन भने २०८ जनालाई तयारी गरेकी थिइन्।
विसं २०५५ देखि अञ्जली दिदी र अञ्जली दिदीकी दिदी रेणु मास्के प्रधान मिली सामूहिक भाइटीका लगाउँदै आएका छन्।
मास्केका हातबाट टीका लगाउन नेपाली र विदेशीको सहभागिता थियो। मास्केले धार्मिक विधिअनुसार मण्डप बनाई अष्टचिरञ्जीवीको पूजाका साथ त्यसमा कहिल्यै नसुक्ने तेलको घेरा लगाएर सयपत्री फूलको माला, सप्तरङ्गी टीका लगाइदिँदै आशीर्वाद दिएकी थिइन्।